बामगठबन्धनको मोर्चा देखेर कांग्रेस अत्तालियो,दाङ क्षेत्र नं. ३ को प्रचारका लागि १२५१ सदस्यीय कमिटि « Tulsipur Khabar
बामगठबन्धनको मोर्चा देखेर कांग्रेस अत्तालियो,दाङ क्षेत्र नं. ३ को प्रचारका लागि १२५१ सदस्यीय कमिटि
आगामी मंसीर २१ गते हुने संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्य नजर गर्दै बाम गठबन्धनले विभिन्न निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ । बाम गठबन्धनले दाङ क्षेत्र नं ३ को संघका लागि बाह्र सय ५१ सदस्य निर्वाचन प्रचार परिचालन कमिटी गठन गरेको नेताहरुले बताएका छन् । एमाले पार्टी कार्यालय तुलसीपुरमा बसेको प्रतिनीधि सभा क्षेत्र नम्बर ३ को निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले हुकुम बस्नेतको संयोजक र मिलन चौधरी उपसंयोजक रहेको बाह्र सय ५१ सदसीय निर्वाचन प्रचार परिचालन कमिटी गठन गरेको हो । कमिटीमा दुवै पार्टीका जिल्ला कमिटी सदस्य, क्षेत्रीय कमिटी, नगर कमिटी, गाउँ कमिटी, वडा प्रमुख तथा जनवर्गिय संगठनका पदाधिकारी समेत रहनेछन् ।
त्यसैगरी संघको दुई वटा प्रर्देशमा पनि निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरिएको छ । जसअनुसार क मा राम बहादुर दहित संयोज र विनोद शर्मा उपसंयोजक रहेको छ सय ५१ सदस्य प्रदेशसभा निर्वाचन परिचान कमिटी गठन गरिएको छ । त्यस्तै ख मा चुर्ण बहादुर वली संयोजक र भिमबहादुर वली उप संयोजक रहेको प्रदेशसभा परिचालन कमिटी गठन गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले कोमल वलीको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक कमिटी, पदम केसी संयोजक र आजाद खड्का उपसंयोजक रहेको संचार परिचालन कमिटी, भागिराम चौधरी संयोजक रहेको मतदाता शिक्षा कमिटी, विजय विक संयोजक रहेको दलित परिचालन कमिटी, खगेन्द्र प्रसाद पोख्रेल संयोजक रहेको व्यापारी परिचालन कमिटी,, विष्णु गिरी संयोजक रहेको स्वास्थय परिचालन कमिटी त्यसैगरी अनारकली मियाको संयोजकत्वमा मुस्लीम परिचालन कमिटी,कृष्ण गोपाल गुप्ताको संयोजकत्वमा मधेसी परिचालन कमिटी गठन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ३ का निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक रामबहादुर दहितको अध्यक्षता एवम् एमाले नेता शोभाराम बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गदै नेताहरुले पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बामगठबन्धनको मोर्चा देखेर कांग्रेस अत्तालिएको बताउदै उनिहरुले गाउँगाउँमा गएर जनताको मन जित्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । सो अवसरमा दाङ क्षेत्र नं ३ संघका उमेद्वार हिराचन्द्र केसी, प्रदेश क का उमेद्वार जगप्रसाद शर्मा उपाध्यय, रामजी चौंधरी, विनोद शर्मा, पदम केसी लगाएतले बैठकलाई सम्बोधन गुर्न भएको थियो ।।